५ आनीबानी, जसले राति सुगर लेभल घट्न सक्छ !! | सुदुरपश्चिम खबर
५ आनीबानी, जसले राति सुगर लेभल घट्न सक्छ !!
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : असार ८, २०७९
Asia freelance smart business women eating instant noodles while working on laptop in living room at home at night. Happy young Asian girl sitting on desk work overtime, enjoy relax time.
रातमा सुगरको लेभल कम हुनुलाई नोक्टर्नल हाइपोग्लाइसेमिया भनिन्छ । रातमा शरीरमा सुगर लेभल घट्नुको कारण के हो ? रातमा सुगर लेभल कम हुँदा भोक लाग्नु, एन्जाइटी जस्ता लक्षणहरु देख्न सकिन्छ ।
रातमा हुने सुगर लेभल कमीको समस्याबाट बच्नका लागि केही जीवनशैलीमा ध्यान दिन सकिन्छ ।
१. राति ढिलो सुत्ने
यदि तपाईं राति ढिलो सुत्नुहुन्छ भने रातमा सुगर लेभल कम हुने जोखिम बढ्न सक्छ । यदि तपाईं राति पनि यसलाई सन्तुलनमा राख्न चाहनुहुन्छ भने राति ढिलो सुत्ने बानी सुधार्नु आवश्यक छ । चाहे तपाईंलाई मधुमेह जस्ता स्वास्थ्य समस्या होस् या नहोस्, कम्तीमा ८ घण्टा सुत्नैपर्छ । यदि रातिको सिफ्टमा काम छ भने यसको दिनचर्या ठीक गर्नुहोस् ।
२. दिउँसो धेरै शारीरिक गतिविधिमा सक्रिय हुने
यदि तपाईं दिनको समयमा अधिक शारीरिक व्यायाममा सक्रिय हुनुहुन्छ भने शरीरमा इन्सुलिनको संवेदनशीलता बढ्नेछ र रातमा मधुमेहको अवस्था कम हुनेछ । त्यसैले दिउँसो आवश्यकताभन्दा धेरै शारीरिक अभ्यास गर्नु पनि उचित हुँदैन । यी समस्याहरु प्रायजसो त्यस्ता महिलाहरुमा देखिन्छ, जो दिनभरि घरको काममा थकित हुन्छन् । यस्तो बानीबाट बच्नुपर्छ ।
३. साँझपछि कसरत
यदि तपाईं साँझपछि व्यायाम गर्नुहुन्छ भने तपाईंको रगतमा चिनीको मात्रा कम हुन्छ । साँझपछि गरिएको व्यायामको प्रभाव इन्सुलिनको स्तरमा पर्छ । मान्छेको सुत्ने समय र व्यायामको बीचमा अन्तर हुनुपर्छ । बिहानको समय कसरतको लागि राम्रो समय हो । साँझमा पनि कसरत गर्नु नराम्रो होइन । तर निश्चित समय र आफ््नो दैनिकी मिलाएर यस्तो अभ्यास गर्नुपर्छ ।
४. राति ढिला खाना खाने
यदि तपाईं रातिमा ढिला खाना खाने गर्नुहुन्छ भने यसमा पनि सुगरको मात्रा कम हुने जोखिम बढी हुन्छ । फेरि कुरा आउला कति समयसम्मलाई ढिला भन्ने । पोषणविद्हरु खाना र सुत्नुको बीचमा कम्तीमा पनि ४÷५ घण्टाको अन्तर हुनु जरुरी छ । सैद्धान्तिक रुपमा खाना र सुताइको समय यसरी तय गरिएको भए पनि व्यवहारिक रुपमा हुबहु पालना गर्न सम्भव नहुनेहरुको लागि खाना खाएपछि केही समयपछि मात्रै सुत्न जानकारहरु सुझाव दिन्छन् ।
५. रातमा मदिराको सेवन
मदिरा आफैँमा शरीरको लागि नोक्सानी दायक खानेकुरा हो । तर रातिको समयमा गरिने मदिराको सेवन भने सुगरको लेभल कम हुने अर्काे कारण हो । रगतमा सुगर लेभल नियन्त्रण गर्नको लागि राति प्रोटिनयुक्त खानेकुरा खान सक्नुहुन्छ ।
राति चिनीको मात्रा सन्तुलित गर्न के गर्ने ?
– राति सुत्नुभन्दा पहिले आफ्नो रगतमा चिनीको स्तर जाँच्नुहोस्, यदि रगतमा चिनीको स्तर कम भएको छ भने हल्का खालको खानेकुरा खानुपर्छ ।
– यदि तपाईंको ब्लड शुगर लेभल रातमा कम छ भने फलफूल खान सक्नुहुन्छ ।
– यदि राति चिनीको स्तर कम छ भने तपाईं चामलको रोटी पनि खान सक्नुहुन्छ ।
– यदि तपाईंमा कुनै प्रकारको संक्रमण छ भने रगतमा चिनीको स्तर कम हुन सक्छ । अनलाइनखबर बाट सभार